Top 6 sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 6 sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Njengoba sonke sazi, ekuthuthukisweni okuphelele kwezingane, ukuphuza ubisi kuhlale kuwumkhiqizo wokuqala obaluleke kakhulu omama abavame ukuwukhetha. Kodwa-ke, ukungezwani komzimba namaprotheni obisi lwenkomo kujwayelekile ezinganeni, okubangela ukuba zihlanze, ziqunjelwe, zikhiphe amathumbu futhi zikhule kancane. Ngakho-ke, omama abaningi manje sebephendukela obisini lwembuzi ngenxa yokuphakama komkhiqizo. Isihloko esilandelayo sizofingqa top 6 ubisi lwembuzi izingane okungcono kakhulu manje ngereferensi yakho.
1 Luyini ubisi lwembuzi?
2 Ingabe ubisi lwembuzi lulungele ukuphuzwa?
3 Top 6 best ubisi lwembuzi lwezingane ezisanda kuzalwa namuhla
3.1 3.1 Korean Goat Milk Hikid
3.2 3.2 Ubisi Lwembuzi Lwembuzi 0+ (izingane 0-12 izinyanga)
3.3 3.3 I-Kabrita Goat Milk No. 1 yezingane ezinezinyanga ezi-0-6
3.4 3.4 Imbuzi Ubisi Lwembuzi BA – Ubisi Lwembuzi
3.5 3.5 Ildong No. 1 ubisi lwembuzi eKorea – ubisi lwezimbuzi lwezingane
3.6 3.6 Ubisi lwembuzi lwezingane DG 1
Luyini ubisi lwembuzi?
Eqinisweni, ubisi lwembuzi lubisi olusengwa ezimbuzini, okuyizimbuzi ezifuywayo. Kuyabonakala ukuthi lokhu kuwumthombo wokudla obalulekile, nonomsoco. Ngakho-ke, ubisi lwembuzi lutuswe njengokudla okunomsoco wezingane.
Ngaphezu kwalokho, ubisi lwembuzi luwukudla kwekhwalithi, okuthenjwa amakhulu eminyaka. Ngaphezu kwalokho, izimbuzi zikhiqiza ubisi oluyingqayizivele, olunempilo olunezinzuzo eziningi zomzimba kanye nemvelo. Uma uphuza uzozwa ukunambitheka okungathathi hlangothi, okufana ne-flavour yamantongomane kanye nokuthungwa okukhilimu okukhanyayo.
Ingabe ubisi lwembuzi lulungele ukuphuzwa?
Qaphela ukuthi ubisi lwembuzi luyindlela ehlukile yezingane ezingezwani namaprotheni kanye ne-lactose obisini lwenkomo. Isizathu siwukuthi ubisi lwembuzi alunawo amaprotheni ayinkimbinkimbi atholakala obisini lwezinkomo futhi lunokuqukethwe kwe-lactose ephansi. Ngakho-ke, i-allergenic encane. Ngesikhathi esifanayo, ubisi lwembuzi alulungele kuphela izingane ezivamile kodwa futhi luyisixazululo esiphelele ezinganeni ezingezwani nobisi lwenkomo.
Izinzuzo zobisi lwezimbuzi kufanele zikhulunywe ukuthi lumnandi, lupholile futhi lucebile ku-omega 6. Ngakho-ke, ubisi lwezimbuzi lunomphumela wokugqugquzela ukuthuthukiswa kobuchopho bezingane. Ngaphezu kwalokho, ubisi lwembuzi lunamafutha aphansi futhi kulula kakhulu ukuluhlephula kunobisi lwenkomo. Ngakho-ke, kuzodala izimo ukuze umzimba ugaye kalula futhi umunce.
Akukhona lokho kuphela, ubisi lwembuzi lubuye lube nemvelo yemvelo yokulwa nokuvuvukala ngenxa yezithako ezifana ne-caprylic acid, ngakho-ke inamandla okudambisa uhlelo lokugaya futhi ithuthukise izinkinga zamathumbu.
Ngaphezu kwalokho, ubisi lwembuzi lucebile ngamaprotheni, uvithamini A, i-calcium, i-magnesium namavithamini A no-B. Lezi zithako zisiza izingane zandise ukuphakama futhi zithuthukise amathambo nesisindo ngokushesha. Ikakhulukazi, ubisi lwembuzi lunamandla okwandisa i-iron ne-copper metabolism, ikakhulukazi kubantu abanobunzima bokumunca nokugaya lezi zinto.
Iphuzu elihlaba umxhwele ukuthi okuqukethwe okunomsoco obisini kuthathwa ngokushesha yizingane, okuholela ekulambeni nasekudleni okuningi. Ngasikhathi sinye, thuthukisa isisindo, isiqu, uvimbele ukuntuleka kwe-iron anemia. Ukusuka lapho, kuyasiza ukusheshisa ukubola kwamathambo, ukugaywa kwamathambo nokwandisa ukuminyana kwamathambo. Ngaleyo ndlela kusiza ukuqinisa amathambo ukuze izingane zibambe futhi zikhule.
Ngakho-ke, ukusebenzisa ubisi lwembuzi kusiza izingane ukuba zithuthukise kakhulu isisindo, zikhulise ukumelana, futhi zithuthukise ukuchithwa kwamathambo. Akukhona lokho kuphela, futhi kwandisa i-serum vitamin, amaminerali kanye namazinga e-hemoglobin egazini.
Kodwa-ke, okubi ngobisi lwembuzi ukuthi alunamsoco kunobisi lwebele noma ubisi lwenkomo. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwe-vitamin D obisini lwembuzi kuphansi kakhulu, i-iron iphansi, i-vitamin B12 ne-folate. Ikakhulukazi uma kungenalo i-pasteurized, ubisi lwembuzi lungaqukatha izinhlobo eziningi zamabhaktheriya abangela izifo kubantwana.
Buka Okuningi: [Review] Ingabe ubisi lwe-Pediasure lulungile? Yiziphi izinhlobo ezifakiwe?
Top 6 best ubisi lwembuzi lwezingane ezisanda kuzalwa namuhla
Ubisi lwezimbuzi luhle kakhulu futhi lufanele izingane ezincane ngesikhathi sokukhula nokukhula. Ngakho-ke, omama bahlale befuna ukuthola uhlobo lobisi ukuze basize izingane zabo zithuthukise ubude nesisindo esiphelele kakhulu. Imigqa yobisi ejwayelekile ebalwe ngezansi izosiza omama babheke futhi bakhethele izingane zabo imikhiqizo engcono kakhulu nefaneleka kakhulu.
3.1 Korean Goat Milk Hikid
Umkhiqizo wokuqala obisini lwembuzi oluphezulu oluyisi-6 olungcono kakhulu lwezingane ezisanda kuzalwa namuhla ubisi lwembuzi yaseKorea iHikid. Lolu hlobo lobisi lukhiqizwa obisini oluphephile lwezimbuzi ezikhuliswe endaweni yemvelo yezintaba eziphakeme zaseKorea. Ngaphandle kwalokho, ubisi lwenzelwe izingane ezineminyaka engu-1 kuye kweyi-9. Ngoba lesi yisikhathi esibalulekile sokukhula okuqinile kobude nesisindo somntwana.
Mayelana nezithako, ubisi lwembuzi ye-Hikid lunezithako ezinomsoco ezinothe nge-Iron, Calcium, Vitamin D, Zinc kanye nezinye izinto eziningi zokulandela umkhondo. Ngaleyo ndlela, umkhiqizo uzosiza ingane yakho ikhule ibe yinde, iphile kahle futhi ihlakaniphe. Ikakhulukazi, okuqukethwe kwemisoco obisi lwembuzi lwe-Hikid kuphakeme ngokuphindwe kaningi kunobisi lwenkomo. Amafutha Amafutha (>35% obisi lwenkomo), Calcium (> 33% obisi lwenkomo), Iron (>5% yobisi lwenkomo), Vitamin A (>10% wobisi lwenkomo)…
Ngaphezu kwalokho, ngobuningi bezakhi zokulandelela, ubisi lusiza ukusekela uhlelo lokugaya nokwandisa ukumuncwa. Ngesikhathi esifanayo, i-metabolism evuselelayo, esiza ingane ukuba ikhule, ikhule futhi ibe nobuchopho obuvelele. Ngaphezu kwalokho, kubuye kube lula ukumuncwa kwama-micronutrients, ukuthuthukiswa kanye nokugcinwa komsebenzi wokuvimbela emathunjini wengane.
Intengo yomkhiqizo: 685,000 VND/700g.
Isithenjwa: Amaphedi amunca ubisi lwebele aphezulu ayi-5 adume kakhulu ngo-2021
3.2 Ubisi Lwembuzi Lwembuzi 0+ (izingane 0-12 izinyanga)
Lona futhi uhlobo lobisi olusezingeni eliphezulu lobisi lwembuzi oluyisi-6 lwezingane ezisanda kuzalwa namuhla olukhethwa omama baseVietnam. Ngaphezu kwalokho, isithasiselo se-fiber yemvelo i-Synergy 1 isiza ukuthambisa indle, ithuthukise ukugaya futhi ivikele amathumbu ngempumelelo.
Ngaphezu kwalokho, ubisi luqukethe i-DHA, i-choline, i-taurine ukusiza ukuthuthukisa ubuchopho nombono. Kusukela lapho, ukusiza izingane zandise ubuhlakani bazo, zithuthukise ikhono lazo lokufunda futhi zijabulele ukuhlola umhlaba ozizungezile. Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo uqukethe i-Palatinose ukusiza ukunikeza amandla angaguquki futhi azinzile kumaseli obuchopho kanye nesistimu yezinzwa.
Into ebalulekile ukuthi ubisi lwembuzi lwe-Goatlac 0+ luqukethe i-calcium, i-phosphate, ne-vitamin D. Lezi zingxenye ziyadingeka ukuze kuhlanganiswe amathambo ukusiza ukuthuthukisa ubude obuvelele. Futhi iLysine isiza izingane ukuba zidle okumnandi, zimunceke kahle. Ngesikhathi esifanayo, ukuthuthukisa i-anorexia, ivuselela ukugaya ukusiza izingane zidle kahle.
Intengo yomkhiqizo: 600,000 VND/800g.
3.3 I-Kabrita Goat Milk No. 1 yezingane ezinezinyanga ezi-0-6
Eqinisweni, ubisi lwembuzi lwe-No. 1 Kabrita oluvela ku-Hyproca Nutrition lugqama ngesilinganiso salo esiphezulu samaprotheni namafutha. Ngaphezu kwalokho, amafutha acebile ku-ARA, Pre-DHA, Omega 6 … asiza izingane ukuba zigaye kalula futhi zimunce. Ngaphandle kwalokho, amaprotheni obisi lwembuzi aqukethe amaprotheni e-casein aphindwe izikhathi ezi-4 kune-whey protein.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yenhlanganisela ye-GOS, i-FOS, namabhaktheriya aphilayo i-Bifidobacterium BB12, umkhiqizo usiza ukwandisa ukusabela kwemvelo kwamasosha omzimba futhi uqinise ukumelana kwengane. Ikakhulukazi, lolu hlobo lobisi lwezimbuzi lwezingane luqukethe ama-nucleotide amaningi emvelo afana nobisi lwebele. Ngakho-ke, ukusiza izingane ukwandisa ukumelana, ukugwema isifo sohudo, i-diphtheria kanye ne-meningitis.
Iphuzu elilodwa omama abalithakasela kakhulu yi-DHA, i-choline, nezingxenye ze-taurine obisini ukusiza ukuthuthukisa ubuchopho nokubona. Ngaleyo ndlela, ukusiza izingane ukwandisa intelligence.
Intengo yomkhiqizo: 480,000 VND/ibhokisi lika-400g.
Bona okwengeziwe: Amabhodlela obisi aphezulu ayi-5 angcono kakhulu ezingane, omama kufanele bazi
3.4 Imbuzi Ubisi Lwembuzi BA – Ubisi Lwembuzi
Omama abanezingane ezingondlekile futhi ezikhubazekile, ubisi lwembuzi lwe-Goatamil BA luyisiphakamiso esihle kakhulu. Lo mkhiqizo ungowohlobo lweDairyGoat – Vietnam Dairy Products Joint Stock Company enezithako ezisuka eNetherlands. Ngaphandle kwalokho, ubisi lwe-Goatamil BA luqukethe amaprotheni aphezulu kakhulu kanye nokuqukethwe kwe-lipid. Ukusuka lapho, nikeza amandla anele ku-anorexia kanye nabadlayo abavilaphayo nge-1 ml yobisi kuphela.
Ngaphezu kwalokho, ubisi lwe-Goatamil BA luqukethe izingxenye zamaprotheni ezimuncwa kalula. Ikakhulukazi, isilinganiso sokuhlukanisa phakathi kweprotheyini yobisi lwembuzi kanye neprotheyini ye-soy isiza ukulinganisa nokubuyisela umsoco wezingane. Akugcini lapho, lolu bisi lwembuzi lucebile nge-amino acid Lysine, into ebalulekile esigabeni sokukhula kwezingane. Ngakho-ke, umkhiqizo usiza izingane ukuba zidle kangcono, zigaye kangcono, zikhule ngokushesha futhi ziphumelele.
Inzuzo evelele yalolu bisi lwembuzi yi-Synergy1 dual fiber system (FOS/Inulin) ukusiza ukuvimbela ukuqunjelwa kanye nokuthuthukisa amagciwane anenzuzo emathunjini. Ngesikhathi esifanayo, thuthukisa ukuhamba kwamathumbu, usize izingane zimunce kangcono. Into eyodwa okumele uyiqaphele ukuthi ubisi lwe-Goatamil BA lunemisoco eminingi esiza ukuthuthukisa ubuchopho nengqondo yengane. Ngesikhathi esifanayo, ukusiza izingane ukuba zihlakaniphe kakhudlwana, zizimisele ukufunda, zibe nelukuluku lokufunda ngezwe elizizungezile.
Intengo yomkhiqizo: 300,000 VND/400g.
3.5 Ildong No. 1 ubisi lwembuzi eKorea – ubisi lwezimbuzi lwezingane
Uma noma yimuphi umama esazibuza ukuthi yiluphi ubisi lwembuzi olulungele ingane yakhe esanda kuzalwa namuhla, ngeke baluzibe ubisi lwembuzi lwe-No. 1 Korean Ildong. Imikhiqizo esesigabeni sekhwalithi ephezulu yenziwe ngezithako ezihlanzekile ezingu-100% eziphephe kakhulu empilweni yezingane.
Mayelana nezithako, ubisi lwembuzi lwe-Korea’s No. 1 Ildong luwumugqa wobisi opholile onamaprotheni namafutha apholile okulula ukumunca. Ngakho-ke, kuyasiza ukuthuthukisa uhlelo lokugaya ukudla ngendlela efanele. Ikakhulukazi, ubisi lwembuzi lwe-Ildong luvame ukuba nokwakheka okusebenzayo okufana nobisi lwebele, ngakho-ke lufanele izingane eziphuza ukukhula, ezidlayo futhi ikakhulukazi ezingezwani nephrotheni yobisi lwenkomo.
Inzuzo yalolu bisi lwembuzi lwezingane alupholile futhi luhlanzekile kuphela, kodwa futhi lunomsoco ophezulu. Ngaphezu kwalokho, ukwenziwa kahle kwenqubo yokukhiqiza emfushane kakhulu kungenzeka ngenxa yokukhuthazwa kokuphatha okudidiyelwe ngohlelo lokuphatha ikhwalithi ye-RMP. Ngenxa yalokho, umkhiqizo ungcono kakhulu empilweni yengane.
Intengo yomkhiqizo: 1,450.00 VND/800g.
3.6 Ubisi lwembuzi lwezingane DG 1
Ekugcineni ohlwini oluyisi-6 olungcono kakhulu lobisi lwembuzi lwezingane ezisanda kuzalwa namuhla yi-DG 1. Lona umugqa wobisi lwembuzi oluhlanzekile lwemvelo oluvela eNew Zealand olunephunga elimnandi lemvelo elikhiqizwa inqubo evaliwe evela obisini lwembuzi olusha.
Mayelana nezithako, ubisi luqukethe izinto eziningi zemvelo eziphilayo ezisebenzayo. Njengama-antibodies, izici zokukhula, ama-nucleotides, ama-oligosaccharides … Ngakho-ke, kusiza ukukhulisa isimiso somzimba sokuzivikela ekukhuleni okunempilo kwengane. Akukhona lokho kuphela, amafutha obisi aphinde agaywe kalula futhi amunceke, acebile ku-AA, pre-DHA, ne-omega 6. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo oluhlanzekile lwemvelo lokuthuthukisa ubuchopho njenge-taurine, i-choline, amavithamini B, Se, Fe… Zonke lezi zithako zizosiza izingane ukuthi zihlakaniphe.
Kuyabonakala ukuthi ifomula yobisi lwembuzi i-DG 1 iyisengezo sokudla okunomsoco ekudleni kwansuku zonke. Ngesikhathi esifanayo, buyisela ukudla okulula okunomsoco ukuze izingane zikhule ziphilile. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwe-mono kanye ne-poly unsaturated fatty acids kanye ne-medium chain triglycerides kunezinzuzo ezinkulu empilweni yomuntu.
Intengo yomkhiqizo: 473,000 VND/400g.
Isihloko esingenhla senziwe Top 6 best ubisi lwembuzi lwezingane namuhla. Kuye ngezidingo nekhono lezomnotho lomndeni ngamunye, abazali bakhetha umkhiqizo ofaneleka kakhulu ukuze ingane yabo iwusebenzise. Ngethemba, ulwazi olungenhla luzokusiza ukuthi ukhethe umkhiqizo wobisi lwembuzi olufanele lwabancane bakho.
Xem Thêm Đánh giá TOP 6 loại gối cao su cho bé. cho trẻ sơ sinh tốt nhất 2020 | Muasalebang
Top phim ma, kinh dị hay và đáng sợ nhất năm 2019 | Muasalebang
Galaxy Watch Active 2 – GIÁ RẺ. Trả góp 0%, BH 12 tháng | Muasalebang